Nibban Air Cooler (AC-25MKB) | Buy online | SHOP.COM.MM
Nibban Air Cooler (AC-25MKB)
ထူးခြားဆန်းသစ်သော Touch Panel ခလုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း။
အခြားသော Air Cooler များထက်အရွယ်အစားပိုကြီးသော ရေငွေ့ပျံကိရိယာ(၃)ဘက်ပါဝင်ခြင်း။
အပူချိန်ကို ၅ဒီဂရီမှာ ၁၅ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့လျော့ချပေးခြင်း။
Air Con များထက် မီးအားစား (၁၀)ဆ သက်သာခြင်း။
Blower Fan အမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့် လေထွက်အားအထူးကောင်းမွန်ခြင်း။
For those who more prefer air coolers than air-cons, this Nibban air cooler isanice one to choose because of having touch panel, fair price and its compact design. It also consumes less energy than air-cons and causing low power consumption. It's also perfect match for such hot weather in our country. Read more Hide
Nibban Aircooler က အအေးမြန်ပြီး အလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့လို့ရလို့ အမြဲသုံးဖြစ်ပါတယ်။ Read more Hide
လျှပ်စစ်အမဓါတ်ထုတ်ပေးသည့်စနစ်ပါရှိသည့်အတွက် အခန်းတွင်း ဘက်တီးရီးယားများကို သေစေပြီး လေကို သန့်စင်စေခြင်း။
သတ်မှတ်ဆိုထိုင်းဆအဆင့်သို့ ရောက်ရှိပါက အလိုအလျောက်ပိတ်ပေးသည့်စနစ်ပါရှိခြင်း။
ရေကန်အတွင်း ရေနည်းနေပါက အချက်ပြမီးနှင့် အသံမြည်စနစ်ပါရှိခြင်း။
Specifications of Air Cooler (AC-25MKB)